घर » दौड » Tower Defense Car Parking game
खेल जानकारी: Tower Defense Car Parking game
नियन्त्रण: Play free Tower Defense Car Parking game. Use arrow key to play Tower Defense Car Parking game
खेल्नु: 22,012 ट्याग: टावर रक्षा, टावर रक्षा खेल, Car Parking, Car Parking games, कार खेल
शहरमा कार यातायात नियन्त्रण गर्नुहोस्। त्यहाँ बन्द र यातायात संग अनुसार मा semaphore संकेत खोलेर सडकमा कुनै दुर्घटना हो सुनिश्चित। यातायात शान्ति तपाईंको हातमा छ
तपाईँले समय खर्च निश्चित पछुताउनु छैन यो सुन्दर फ्लैश दौड खेल जाँच गर्नुहोस्। आफ्नो विरोधीको अगाडि दौड समाप्त र तपाईं जीत हुनेछ। कमाएको पैसा अन्य कार र कार भागहरु र यस्तो किन्न प्रयोग गरिने छ। यो दौड tr वरिपरि ड्राइभ
कार्टिङ सुपर जाने
कार्टिङ सुपर जाओ टर्बो Nuke मा अधिक विकासकर्ताहरूले रमाइलो नयाँ खेल हो! खेल को उद्देश्य दौड ट्र्याक मारा र तपाईंले छिटो खत्म मा प्रतिस्पर्धा हरेक जाति जीत तपाईं आफ्नो मनपर्ने दौडने चयन गर्न सक्नुहुन्छ र सुरुमा Kart जाने र mone कमाउन छ
पुराना बग खरायो चुनौती
तपाईं एक सुन्दर पुराना कार चढेर Bugsy गरेको खरायो छन्। यहाँ सबैको प्रमाणित गर्न ड्राइव र विभिन्न चुनौतीहरू र अवरोध संग अचम्मको स्तर भर खरायो प्राप्त गरेर भीड प्रभावित गर्न सक्छन् एक बुलेट जस्तै कति छिटो आफ्नो मौका छ सङ्कलन गर्दा ओ
Kart 3D जाने
मा Karts जाएँ 3D रेसिंग प्राप्त गर्नुहोस्। तपाईं Karts जाएँ 3D च्याम्पियनशिप लागि रेस रूपमा4ट्रयाक मार्फत3अन्य racers मा लिनुहोस्। प्रत्येक स्तर कुनामा र straights लिदा त तपाईं बारेमा आफ्नो बुद्धिमत्ता राख्न कठिन प्राप्त हुनेछ। तिनीहरूले जस्तो रूपमा, अन्य racers लागि बाहिर हेर्न
तपाईं प्रयास र6अन्य विरोधी पारित रूपमा 3D आसपास दौड पटरिहरु। तपाईं अर्को कप अनलक गर्न 4th ठाउँ वा उच्च! राम्रो किस्मत योग्य छ!
आफ्नो खेल कार मा द्वीप वरिपरि क्रूज! Cruisin रेस Zombooka2 स्तर पैक टर्बो गोल्फ Spitfire1940 Sniper वर्ष 1 Cyclomaniacs Cruisin, विरोधीहरूले विरुद्ध द्वीप जात को एक श्रृंखला वरिपरि ड्राइव आफ्नो खेल कार आफ्नो कार स्तरवृद्धि गर्न जात जीत
छिटो हुन र स्मार्ट हुन! के एक उत्कृष्ट पायलट तपाईं अन्य कार र शो विरुद्ध दौड! यो निश्चित सजिलो छैन, तपाईं, ठूलो गति ड्राइभमा तपाइँको बिगार्न सक्छ कि अन्य कार बाहिर हेर्न र सबै सम्भव बोनस गर्न सक्छन् तपाईं प्राप्त छ! हुन
तपाईं प्रयास र6अन्य porsches पारित रूपमा 3D आसपास दौड पटरिहरु। तपाईं अर्को कप अनलक गर्न उच्च 4th ठाउँ वा योग्य छ!
रोमाञ्चक यात्रा मा आफ्नो कालो लेम्बोर्गिनी ड्राइभ, सडक मा पैसा र इन्धन ट्यांकी टिप्न!
कार जंगी जहाज
प्रत्येक स्तर मा र्याम्प उचाइ र गति सेट र नष्ट अन्य सबै कार! आफ्नो कार को लागि राम्रो अपग्रेड प्रत्येक स्तर पछि किन्न। आफ्नो कार नष्ट गरौं !!!
सूत्र दौडने 2012
तपाईं प्रयास र 31 अन्य racers पारित रूपमा 3D आसपास दौड पटरिहरु। हेर्नुहोस् ती कुना र ब्रेक लगान!
यो सुन्दर NASCAR दौड डर्ट Racers भनिन्छ खेल जाँच! एक राजमार्ग मा आफ्नो मांसपेशी कार ड्राइभ र अन्य कार मा तोड। माथिल्लो दायाँ कुनामा तपाईं आफ्नो कार धेरै क्षति कसरी लिन सक्छन् संकेत गर्छ कि एक पल्ट देख्ने मनमा राख्नुहोस्।
आफ्नो कार द्वारा स्पेस जानुहोस्।